Nanambara ny sekreteran'ny minisiteran'ny fiaramanidina sivily vaovao any India
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Nanambara ny sekreteran'ny minisiteran'ny fiaramanidina sivily vaovao any India
Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Sekreteran'ny minisiteran'ny fiaramanidina sivily
Shri Rajiv Bansal IAS (NL: 88) dia nitana ny andraikitry ny sekretera, ny minisiteran'ny fiaramanidina sivily ao amin'ny governemanta India, ny lefitra Shri Pradeep Singh Kharola, IAS (KN: 85) vokatr'izany fanandramana nataony tamin'ny 30 septambra 2021 izany.
Shri Bansal dia tompon'andraikitra amin'ny serivisy fitantanana indiana amin'ny andiany 1988, avy amin'ny cadre Nagaland.
Izy dia nitana andraikitra lehibe maro tao amin'ny Governemantan'ny firaisana, anisan'izany ny filoha sy ny mpitantana ny Air India Ltd. ao amin'ny Ministeran'ny fiaramanidina sivily.
Izy koa dia nitana andraikitra lehibe maromaro tao amin'ny Governemantan'i Nagaland.
Nanana andraikitra lehibe maro tao amin'ny Governemantan'ny Union izy, anisan'izany Filoham-pirenena sy talen'ny fitantanana, Air India Ltd., Ministeran'ny fiaramanidina sivily; Sekretera fanampiny, M / o solika & gazy voajanahary; Sekretera iraisana, M / o Electronics & Technology Technology; Sekretera, Vaomiera mifehy ny herinaratra foibe (CERC); ary Sekretera iraisana, Indostria mavesatra D / o, Indostria lehibe sy orinasa lehibe.
Izy koa dia nitana andraikitra lehibe maromaro tao amin'ny Governemantan'i Nagaland nahitana ny Kaomisera & Sekretera, D / o Fahasalamana & Fianakaviana, Nagaland; Kaomisera & sekretera, fanabeazana amin'ny Sekolin'ny sekoly, Nagaland; Kaomisera & sekretera, departemantan'ny vola, Nagaland, sns.
Any amin'ny Rajiv Gandhi Bhavan ao amin'ny seranam-piaramanidina Safdarjung any New Delhi, ny Minisiteran'ny fiaramanidina sivily dia tompon'andraikitra amin'ny famolavolana ny politikam-pirenena sy ny programa ho an'ny fampandrosoana sy ny fitsipiky ny sehatry ny fiaramanidina sivily ao amin'ny firenena. Izy io dia tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny lalàna momba ny fiaramanidina, 1934, ny lalànan'ny fiaramanidina, ny taona 1937 sy ny lalàna maro hafa mifandraika amin'ny sehatry ny fiaramanidina eto amin'ny firenena. Ity Minisitera ity dia mampiasa fifehezana ara-pitantanana amin'ireo fikambanana miraikitra sy mahaleo tena toa ny Direktorat jeneralin'ny fiaramanidina sivily, ny birao fiarovana ny sidina sivily ary ny Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy ary ireo sekretera misahana ny sehatra ho an'ny daholobe mifandraika amin'izany toy ny National Aviation Company of India Limited, Authority of India sy Pawan Hans Helicopters Voafetra. Ny Kaomisionan'ny fiarovana ny lalamby, izay tompon'andraikitra amin'ny fiarovana amin'ny fitsangantsanganana an-dalamby sy ny asa raha ny voalazan'ny lalàna momba ny lalamby, 1989 dia eo ambany fifehezan'ny Minisitera ihany koa.
Ny Direktorat jeneralin'ny fiaramanidina sivily (DGCA) no rafitra mpanara-maso ny sehatry ny fiaramanidina sivily, izay miatrika indrindra ny olana ara-piarovana. Izy io dia tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny serivisy fitaterana an'habakabaka mankany / avy / ao India sy ny fampiharana ny lalàna mifehy ny sivily sivily, ny fiarovana ny rivotra ary ny fenitra azo itokisana. Ny DGCA koa dia mandrindra ny asa rehetra mifehy miaraka amin'ny International Civil Aviation Organization (ICAO).